"Ny lanitra mitory ny voninahitr’Andriamanitra ; ary ny habakabaka manambara ny asan’ny tànany…Tsy misy teny na fiteny anefa ; tsy re izay feony. " Salamo 19:1,3
"Aoka hidera an’i Jehovah ireo noho ny famindrampony sy ny fahagagana ataony amin’ny zanak’olombelona !" Salamo 107:31
Hoy ity kristiana iray, avy tany amin’ny Repoblika demokratika alemana taloha, nitantara :
“Nanana mpifehy tena sarotra iaraha-monina izahay, tany amin’ny kolkhoze (toerana fambolena iaraha-mitantana). Indray andro izy, raha tonga niasa, dia hita fa niova tanteraka. Izahay rehetra no samy nahamarika avy hatrany io fiovana io. Nanjary nalemy fanahy taminay rehetra izy, tsy niteny ratsy intsony ary nanampy betsaka anay. Teo amin’ny fotoana fialana sasatra, dia nitantara izao zavatra izao taminay izy :
Andro vitsivitsy lasa izay dia nandeha nitsangantsangana aho. Efa hariva be tamin’izay, efa alina aza ny andro, nefa rakotra kintana ny lanitra. Nanohina ahy izany. Dia nanjary nisy fisalasalana aho : Afaka niforona ho azy ve ireo rehetra ireo ? Tsy azo heverina izany ! Ny fanorenana rehetra dia mila mpanao maritrano sy injeniera… Dia ho niforona ho azy ve izao rehetra izao ? Fahadisoan-kevitra lozan-tany re izany ! Resy aho, ka niondrika teo anatrehan’Ilay Mpahary. Fa Andriamanitra nanohy ny asa natombony tato anatiko : nahita fiadanam-po aho rehefa niaiky ny fahotako sy nino an’i Jesosy Kristy. Ankehitriny aho dia te hanompo Ilay maty ho ahy, sy niteny ka nampisy izao voary mahafinaritra izao.
Nahasosotra ireo namanay izany fiovana izany. Na izany aza anefa dia nanaja ilay lehibeny ihany izy ireo, ary izahay kristiana kosa dia nandray izany fiovana izany ho toy ny fanomezana avy amin’Andriamanitra. Hatreo dia nanjary namanay sy rahalahinay io lehibenay io. Nanampy anay izy ary nankasitrahinay izany ; nijoro ho vavolombelona mahatoky ho an’ny Tompony izy.
Nampiasa ny feon’ny zavaboary Andriamanitra, mba hanatanteraka izany fiovam-po mahagaga izany.”